Amagagasi kaKelvin asheshisa ukuncibilika kwe-Antarctica | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Antarctica ingenye yezindawo lapho kuthinteka kakhulu imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. I-Thaw ingenye yezinkinga ezikhathaza kakhulu, hhayi nje ngoba isongela indlela yokuphila yezakhamizi zaleli zwekazi, kepha futhi ngoba ukukhuphuka kolwandle kungaba nemiphumela kuyo yonke iplanethi.
Manje, ngaphezu kwalokho, abacwaningi e-ARC Center of Excellence for Climate System Science bakutholile lokho imimoya e-East Antarctica ingadala ushintsho olwandle olusatshalaliswa ngamagagasi kaKelvin, okuluhlobo lwamaza olwandle.
Amagagasi kaKelvin njengoba behlangana nomumo womhlaba ongaphansi kwamanzi weNhlonhlo Yasempumalanga ye-Antarctic, cindezela amanzi afudumele emashalofini amakhulu eqhwa ngasogwini lolwandle. Isikhathi samanje esifudumele se-Antarctic sidlula eduze kweshelufu lezwekazi lesifunda, elihlangene nokuthuthwa kwamanzi afudumele ngaphambili kweqhwa, kubangela ukuncibilika komkhakha osentshonalanga ye-Antarctic ukuba kusheshe.
Izinguquko emimoyeni yasogwini kule ngxenye yomhlaba zingahle zihlobene nokushintsha kwesimo sezulu, kusukela Njengoba amazinga okushisa asemhlabeni wonke ekhuphuka, kuvunguza imimoya enamandla yasentshonalanga ehambisana neziphepho phezu kolwandle oluseNingizimu oluya lushisa, kubangela ushintsho emimoyeni eduzane nase-Antarctica.
Ukuncibilikiswa kwezwekazi kuyinkinga ekhathazayo. Ngo-2100, ulwandle lungakhuphuka ngaphezu kwemitha elilodwa, futhi ngo-2500, ngaphezu kwamamitha ayi-15 ngaphansi kokuvela kwamanje kokukhishwa kwegesi yokushisa. Ngakho-ke, abacwaningi bakholelwa ukuthi kufanele sithathe izinyathelo ezisheshayo zokulwa nokushisa komhlaba, ngoba uma senza kanjalo, »kungenzeka ukuthi imizila yeziphepho eziseningizimu izobuyela endaweni esenyakatho kakhulu, enganciphisa ukuncibilika ENtshonalanga Antarctica. Kunganciphisa nokufudumala kwezilwandle futhi kunikeze nethuba lokusimamisa amanye ama-ice sheet amakhulu aphelela olwandle.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Amagagasi kaKelvin asheshisa ukuncibilika kwe-Antarctica